5 matambudziko kune wese muzvinabhizimusi ayo anofanira kugadziriswa neakanaka manejimendi software | ECommerce nhau
5 matambudziko kune wese muzvinabhizimusi anofanirwa kugadziriswa neakanaka manejimendi software
ECommerce nhau | | StartUps uye vanamuzvinabhizimusi
Hofisi otomatiki inotsanangurwa senge iyo otomatiki ekutaurirana uye ehutongi maitiro mumahofisi. Mune mamwe mazwi, ndezve shandisa sainzi yemakomputa kumahofisi ehunyanzvi uye mabasa. Neichi chikonzero, hofisi otomatiki zvakare zvinhu uye makomputa zvirongwa izvo zvinoiswa kune hofisi basa.
Hapana mubvunzo kuti, zvinotsanangurwa neiyi nzira, hofisi otomatiki yagara kubvira yapinda magiya einenge chero kambani. Zvishandiso zvemakomputa zvinotibatsira kuronga mabasa, kuzviita kana kuongorora mhedzisiro, pakati pemamwe akawanda mabasa. Kune akawanda software uye software mapakeji anokwanisa kupa mhinduro kune vezvemabhizimusi. Semuenzaniso, iwo aunogona kuwana mairi https://www.ofi.es/software/gestion, paunenge uine manejimendi akasiyana uye accounting software zvishandiso zvebhizimusi manejimendi, maitiro ekutengesa kana akasarudzika nerudzi rwebhizinesi: kune zvitoro, vhudzi revhudzi, zvikoro zvemitauro ...
Wakamboona here kuti mangani matambudziko a yakanaka manejimendi software? Pano tiri kuzotaura newe chete nezve zvakajairika uye zvakakosha, asi zviri pachena kuti kushandiswa kwemidziyo iyi kwave kwakakosha kune chero kambani.
1 Bhizinesi kutenderera manejimendi
2 Sangano remasheya
3 Kudzora kwemari nemari
4 Basa uye kuronga manejimendi
5 Vashandi mashedhi uye maquadrants
Bhizinesi kutenderera manejimendi
Wakadzora nguva dzese kutenga, kuunganidza uye mumatura mune yekuchengetera Icho chimwe chekutadza kwemumwe muzvinabhizinesi. Iko mukana wekuve neruzivo urwu rwuripo ipapo, pane chero chishandiso (kunyangwe parunhare mbozha) uye yakapusa uye yakakodzera mharidzo kune izvo zvinodiwa ndeimwe yemabhenefiti makuru ekushandisa kwehofisi.
Rimwe remabasa akakosha mumakambani mazhinji kuchengetedza a ruzivo rwakakwana uye rwakarurama rweimba yekuchengetera. Kune izvi, nhasi zvakakosha kuti uve nehofisi otomatiki chishandiso icho chinofambisa kuzadzikiswa kwebasa nemaitiro chaiwo uye mharidzo inobvumidza kuve neruzivo chairwo rwechitoro nguva dzese. Nhasi, maturusi aya anounzwawo mumhando yakashandisirwa kumidziyo yese uye yakawanda-mushandisi.
Kudzora kwemari nemari
Iyo yakanaka manejimendi chirongwa ichakubatsira iwe bata kambani accounting nekunyatso uye nekujeka. Kana iwe uchida kuchengetedza zvakakwana uye zvine simba kutonga, hapana mubvunzo kuti iwe unoda yakanaka manejimendi software, inokwanisa kubatanidza pamwe chete chishandiso ruzivo rwemaodha, zvekutumira manotsi, kuunganidzwa kana masheya ane accounting iyo iyo yega kambani inofanirwa kuchengeta.
Basa uye kuronga manejimendi
Dzimwe nguva mumakambani kurongeka kwekukanganisa kunoitika: misangano yakatarwa pamazuva akatogarwa kare, kana nguva dzisingakwanisike dzakatemerwa mamwe mabasa. Iyo yakanaka manejimendi chirongwa ichagadzirisa ese aya matambudziko, kuti iwe ugone kutarisa pane zvishoma kuti iyo ajenda yakaiswa sezvaunoda.
Vashandi mashedhi uye maquadrants
Kusiyanisa zororo revashandi nemazuva ekuzorora zvaimbove imwe yemusoro mukuru wevanoshandira nemaneja. Ine chirongwa chakanaka chehofisi, ichi chinhu chekare. Unogona gadzirisa maquadrants uye zvirongwa kuitira kuti iwe uwane zvakanyanyisa kubva kune zviwanikwa zvevanhu zvaunogona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » 5 matambudziko kune wese muzvinabhizimusi anofanirwa kugadziriswa neakanaka manejimendi software
Ungachengetedza sei mari paCommerce?
Mazano eako eCommerce SEO mushandirapamwe kuti ubudirire